၁၈၅၀ ~ ၂၀၀၀nm ASE Broadband အလင်းရင်းမြစ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - လှိုင်းအလျား ၂.၀Î¼m-band တီးဝိုင်း - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Optic module တွေ > Broadband အလင်းရင်းမြစ်များ > ၁၈၅၀ ~ ၂၀၀၀nm ASE Broadband အလင်းအရင်းအမြစ်ရှည်လှိုင်းအလျား 2.0engthm-band
၁၈၅၀ ~ ၂၀၀၀nm ASE Broadband အလင်းအရင်းအမြစ်ရှည်လှိုင်းအလျား 2.0engthm-band
ရှည်လျားသောလှိုင်းအလျား 2.0 Wm-band 1850 ~ 2000nm ASE Broadband အလင်းအရင်းအမြစ်သည် thulium fiber laser technology နှင့်မြင့်မားသော output power ဖြင့်အခြေခံသည်။
Long Wavelength 2.0Î¼m-band 1850 ~ 2000nm ASE Broadband Light Source ၏နိဒါန်း ၁
2.0Î¼m band band ASE broadband light source သည် thulium fiber laser technology နှင့် output ပါဝါမြင့်မားသည်။ အဆိုပါရောင်စဉ် 1850 ~ 2000nm ဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်လေဆာဇီဝဗေဒ, ရောင်စဉ်တိုင်းတာခြင်းနှင့်အခြား application များအတွက်သင့်လျော်သည်။ ဆက်သွယ်မှုမျက်နှာပြင်နှင့်အိမ်ရှင်ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲကိုအလင်းအရင်းအမြစ်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်လွယ်ကူစေသည်။
ရှည်လျားသောလှိုင်းအလျား2.0Î¼m-band 1850 ~ 2000nm ASE Broadband Light Source ၏ 2. အင်္ဂါရပ်
ရှည်လျားသောလှိုင်းအလျား 2.0 bandm-band 1850 ~ 2000nm ASE Broadband Light Source 3. လျှောက်လွှာ
ဖိုင်ဘာ optic ကိရိယာစမ်းသပ်ခြင်း။
၁၈.၅၀ မှ ၂၀၀၀ စင်တီမီတာရှည်သောလှိုင်းအလျား၏ရှည်လျားသောလှိုင်းအလျား၏ 4. Optical-Electrical လက္ခဏာများ
လှိုင်းအလျား operating nm 1850-2000
output ကိုပါဝါ mW 10 စဉ်ဆက်မပြတ်ပါဝါ
operating mode ကို - စဉ်ဆက်မပြတ်အလင်း
ရောင်စဉ်တန်းအကျယ် nm 100 @ 10dB
ရောင်စဉ်တန်းပြား dB ‰¤15
output ကိုအထီးကျန် dB 30
polarization ကို၏ဒီဂရီ dB ¤‰0.2
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ V AC အ 110 ~ 240V, <20W @ 25W @ ခုံတန်း
၁၈.၅၀ ~ ၂၀၀၀nm ASE Broadband အလင်းရင်းမြစ်မှရှည်လျားသောလှိုင်းအလျား၏ရှည်လျားသောလှိုင်းအလျား၏ ၅.၁ ပုံမှန်သွင်ပြင်လက္ခဏာ
၆.၀.၀.၀၅.၀၂ ရှည်လျားသောလှိုင်းအလျားအား ၁၈၅၀ မှ ၂၀၀၀nm ASE Broadband အလင်းရင်းမြစ်မှပို့ဆောင်ခြင်း၊ သယ်ယူခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
A: ကျွန်ုပ်တို့တွင် 10mW 20mW ရှိပြီးသင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
hot Tags:: တာရှည်လှိုင်းအလျား2.0Î¼m-band 1850 ~ 2000nm ASE Broadband အလင်းရင်းမြစ်, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, လက်ကားရောင်းဝယ်မှုစက်ရုံ, စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သော, အမြောက်အများ, တရုတ်, တရုတ်နိုင်ငံထုတ်လုပ်, စျေးပေါ, စျေးနိမ့်, အရည်အသွေး
2.0Î¼mတီးဝိုင်း ASE broadband အလင်းအရင်းအမြစ်
1060nm AB Broadband အလင်းအရင်းအမြစ် FBG ဆန်ခါပြုလုပ်ရန်အတွက်
Optical Sensor အတွက် L-band ASE Broadband Light Source Module
Medical Imaging Solution သည် 1550nm ASE Broadband Light Source ဖြစ်သည်